खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो, खानेतेलको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
२०७८ असार ३, बिहीबार
२०७७ माघ ४, आईतवार ०७:१५:००
वीरगञ्ज । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि आधारभूत खाद्यान्नको मूल्यमा चाप परेको छ । कच्चा पदार्थ र ढुवानी महँगो भएपछि चामल र तेलजस्ता खाद्यान्नको मूल्य बढेको हो ।
भारतमा किसान आन्दोलनका कारण धानको मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव चामलको मूल्यमा देखिएको उद्योगी सुरेश रूङ्गटाले बताए । विगत १ महीनायता चामलको भाउ किलोमै ४ रुपैयाँसम्म बढेको उनले बताए ।
नेपालमा हुने चामलको अधिकांश उत्पादन भारतीय धानको भरमा छ । भारतबाट आउने धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २०० रुपैयाँसम्म बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । विगतमा भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम भाउमा धान पाइएकोमा अहिले महँगो परेको रूङ्गटाले बताए ।
केही समयअधिसम्म १ हजार ८ सय रुपैयाँमा पाइएको धान अहिले भारतको सीमावर्ती शहर रक्सौलसम्म ल्याउन २ हजार रुपैयाँसम्म परेको उद्यमीले बताएका छन् । भारतमा धानको मसर्थन मूल्य १ हजार ८५० रुपैयाँ छ । धानको भाउ बढ्नुअघि २५ किलो कतर्नी चामलको कारखाना मूल्य १ हजार ४५० रुपैयाँसम्म रहेकोमा अहिले १ हजार ५५० सम्म पुगेको न्यू ओम खाद्य उद्योगका सञ्चालक विश्वामित्रप्रसाद कलवारले जानकारी दिए ।
खानेतेलको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म बढेको ओसीबी फुडका सञ्चालकसमेत रहेको उद्योगी रूङ्गटाले जानकारी दिए । रूङ्गटाका अनुसार उद्योगले १० लिटरको १ हजार ४०० रुपैयाँमा बेच्ने भटमास तेलको मूल्य अहिले १ हजार ९०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
सूर्यमुखी तेल भटमासको तुलनामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ महँगो हुन्छ । तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँसम्म बढेको छ । कारखाना मूल्यभन्दा उपभोक्ता मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढी हुने विक्रेता बताउँछन् ।
अधिकांश स्वदेशी तेल उत्पादकले भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गर्छन् । केही उद्योगले भटमासको दाना आयात गर्छन् । विगतमा प्रतिमेट्रिक टन ९मेट० भटमासको अर्धप्रशोधित तेल ७०० अमेरिकी डलरमा आउनेमा अहिले भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म आइपुग्दा यसको मूल्य १ हजार १०० डलर पुगेको उद्यमीले बताए । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।
पार्टी विवादमै वित्यो ओलीको चारवर्ष : विकास बजेट चौथाई मात्...
यस देशमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउँदा सित्तैमा चिकेन पाइने
राष्ट्रपतिको सर्वोच्चलाई जवाफ–ओली र देउवा दुवैले विश्वासको म...
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ :राष्ट्रपतिबाट भएको न...
रोनाल्डोको सानो त्रियाकलापले कोकाकोलाले अरबौ गुमायो
पत्रकार पारशविक्रम शाहमाथि प्रहरीबाट कुटपिट जनाउँदै भ्रत्र्स...
पार्टी विवादमै वित्यो ओलीको चारवर्ष : विकास बजेट...
यस देशमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउँदा सित्तैमा चिकेन प...
राष्ट्रपतिको सर्वोच्चलाई जवाफ–ओली र देउवा दुवैले व...
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ :राष्ट्रपति...
चर्चामा आउनको लागि उर्वसीको हतकण्डा, गरिन् माटो यो...
रोनाल्डोको सानो त्रियाकलापले कोकाकोलाले अरबौ गुमाय...
ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर रमिता देखाए,हटाइएका मन्त्री...
न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नै साख शून्यमा झार्ने काम किन गरे ?
आउँदाे १५ दिनमा नेपाली राजनीति कता मोडिएला ?
कर्णाली प्रदेश सरकार पुनः संकटमा , अदालतको आदेशले एमालेमा ए...
एउटा न्यायाधीशले इजलासमा कति फरक पार्दछ ?
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री एकजुट, सरका...